क’मेडी च्याम्पियन बि’बादमा तानियो, खबपुका समर्थकले रि’जल्ट आउट गर्न गरे माग! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
क’मेडी च्याम्पियन बि’बादमा तानियो, खबपुका समर्थकले रि’जल्ट आउट गर्न गरे माग!
चैत्र १, काठमान्डौ । धादिङका हिमे’स पन्तले ‘कमेडी चेम्पियन’को उपाधि चुमेपछी बिबाद उत्पन्न भएको छ । नेपालकै पहिलो स्ट्यान्ड–अप कमेडी रियालिटी सो ‘कमेडी च्याम्पियन’मा पन्तले दुई जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै क’मेडी चेम्पियनको उपाधि हात पारेपछि खबपुका समर्थकले भोटिंग नतिजा सा’र्बजानिक गर्न माग गरेका छन ।
चार बजेसम्म भोट भएको दाबि गर्दै उनीहरुले १२ बजे सम्मको मात्रै भोटलाई मान्यता दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
ख’बपुलाई हराउन धाँदली भएको भन्दै कमेडी च्याम्पियन बिरुद्द समेत नाराबाजी गरेका छन् । कलाकार नन्द घर्ति मगरले भोटिंगमा चलखेल भएको दाबि समेत गरेका छन् । उनले अर्गानिक कमेडीलाई महत्व नदिएर कमेडी च्याम्पियनले पैसाको ब्या’पार गरेको आ’रोप लगाए ।
भोटिंग सुबिधा दिएको इसेवा चोर भएको भन्दै इसेवा बिरुद्द कार्यक्रम स्थल बाहिर नाराजुलुस लगाएका थिए । इसेवालाई खारेज गर्न नारा जुलुस लगाएका थिए । इ’सेवाबाट मात्रै भोट गर्ने प्रक्रिया कमेडी च्याम्पियनलाई शहरीकरण गरेको आ’रोप लगाएका थिए ।
त्यसैगरी केकी अधिकारि बि’रुद्द समेत ना’राबाजी गरेका थिए । केकिको आफ्नै सो भएकोले उनि बिरुद्द नाराबाजी गरेका हुन् ।
उनीहरुले खबपुलाई जातीय वि’भेद गरेर हराएको समेत आ’रोप लगाएका छन् । रिजल्ट नदेखाए आ’न्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् ।
Previous “सामाजिक न्यायको हक” सु’निश्चित गर्न tootle ले जति भूमिका अरुले खेलेको छैन: आयुस कार्की
Next युएईमा र*हेका नेपालीहरुलाई दू*तावासको अत्यन्त ज*रुरी सूचना! शेयर गरौं।